15 wepa 17 madziva anosvinurira gore rose uye mumwe guru indoor madziva zvakabatana huru panze dziva uyewo akazaruka rose gore. Chinozunguzirwa dziva uye egungwa dziva kumutsa zviri kuitika yegungwa mazororo. The egungwa dziva riri hombe! Rinogona kushandiswa chaizvo mapuranga akagadzirirwa indoor kushandiswa uyewo kwako bhodhi.
Kana uri kutsvaka vamwe muviri kune 25 M (82 Ft) pool uye 3 M (10 Ft) Diving shongwe. The indoor ushingi dziva zvinowanika 11 nemasiraidhi ane zvachose kureba kusvika 1 ? km (0,6 maira). The soro yemasiraidhi anotora iwe pasi chinofadza kukwira kubva 17 M (55 Ft). wo, pane yakafarikana yemasiraidhi kusvika matatu vanhu parutivi uyewo hanyanisi ondomoka uye 180 M (590 Ft) refu gomo rwizi, flanked pamwe poromoka matombo, kana uchinzwa zvarisingazivi.
Akagadzirira arongedze swimsuit yako kuenda rwendo kuwana The Best Water Parks mu Europe? Heck ehe! Best nhau asi, unogona kuwana zvose nzvimbo izvi nyore achibatsirwa SaveATrain ! With hapana chakavigwa mamwe mari, uchawana zvakawanda kupedza pamusoro Vatasvi zvikuru uye nguva dzakanaka! Book kuti Summer pazororo, ikozvino!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-water-parks-europe%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#summertrip #summerwaterpark #waterparks europetravel yemhuri summerholidays